Wzọ 6 nke akara ngosi mmekọrịta mmekọrịta ka mma | Martech Zone
Akara ngosi mmekọrịta na-anọchite anya mmekọrịta, dị ka retweets, mmasị, na votu, nke ndị na-elekọta mmadụ mgbasa ozi na akara gị, nke gosipụtara ọkwa ya na ogo ya na njikwa ọchụchọ. Google, Bing, Yahoo, na engines ọchụchọ ndị ọzọ na-eji ụfọdụ algọridim iji chọpụta ogo nke nsonaazụ ọchụchọ. Mmetụta nke akara ngosi mmekọrịta na nsonaazụ nke algorithms bụ nkwupụta onye ọ bụla, ebe ọ bụ na algorithms nke engines ọchụchọ na-echebe site na nkwekọrịta na-enweghị nkwupụta. Agbanyeghị, mgbasa ozi mmekọrịta bụ n'ezie ụzọ kachasị dị irè iji kwalite ọdịnaya na ịntanetị, ma ọ bụrụ na blọọgụ ya, akwụkwọ ya, vidiyo ya, ọrụ ya, ma ọ bụ ọdịnaya ọ bụla ọzọ, yana nhọrọ maka ndị na-ege gị ntị ma ọ bụ ndị na-eri ihe iji tụọ ọrụ ma ọ bụ kesaa ọdịnaya ahụ ndị enyi ha, site na bọtịnụ òkè. N'okpuru bụ ụfọdụ ụzọ nke akara ngosi mmekọrịta na-esi melite ogo:
Onu ogugu ndi na-eso Social Media
Onu ogugu ndi mmadu na-agbaso akara gi na mgbasa ozi mgbasa ozi bu ihe ngosi nke nkpa gi na igwe nyocha. Ọ bụrụ na ị nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị na-eso ụzọ, engines ọchụchọ ga-amata nke ahụ ma ọ ga-emetụta ọkwá gị na nsonaazụ ọchụchọ. Ihe ọzọ na-enye aka metụtara mgbasa ozi mmekọrịta bụ ọnụ ọgụgụ nke mbak ma ọ bụ retweets akara gị na-enweta, dị ka ọnụ ọgụgụ buru ibu nke mbak na-eme ka ozi ntugharị gaa na saịtị gị.
Nchọgharị ọchụchọ na-amata ma buru nọmba na n'uche àgwà nke backlinks mgbe ogo nsonaazụ ọchụchọ. Backlinks bụ njikọ na weebụsaịtị ndị ọzọ na-eduga na ibe gị. Ebe nrụọrụ weebụ ndị ahụ nwere ntụkwasị obi ma dị mkpa, nke ka mma nke backlinks gị.
Nyocha na-egosi afọ ojuju nke ndị ahịa gị site na ọrụ ma ọ bụ ngwongwo ị nyere, yana otu a, dị mkpa maka azụmaahịa dị iche iche. Yabụ, ọ bụrụ na ị bụ onye nwe azụmaahịa, ị kwesịrị itinye usoro nyocha na ibe weebụ gị, ebe ọ bụ na nyocha dị mma ga-atụnye ụtụ na ibe gị ịbụ nke kachasị mma site na igwe ọchụchọ. Kwesịrị ị na-atụle weebụsaịtị nke ipuiche na-enye ihe ọmụma na ahịa ’reviews, dị ka ezigbo reviews na ndị dị otú ahụ a ma ama na saịtị ga-emekwa ka gị ogo.
Etu ị ga - esi bawanye akara ngosi mmekọrịta gị?
Ọ bụrụ na ị na-achọ imeziwanye ọkwa ọchụchọ gị site na ịbawanye mmekọrịta mmadụ na ibe gị, ikekwe ị kwesịrị ịtụle ịchụ otu n'ime ọtụtụ ụlọ ọrụ na-enye ọrụ ha n'ịntanetị, dị ka Ndị ahịa asatọ imepụta mgbasa ozi ọha na eze maka gị. Ọdịmma dị elu na nnabata ọdịnaya dị oke mkpa maka mmekọrịta dị mma. Ozugbo ọdịnaya dị mma, ị kwesịkwara ijide n'aka na ọ chọtara ọnọdụ ya na ndepụta akụkọ nke mgbasa ozi mmekọrịta, site na ịdebanye oge niile, ma ọ bụ na-enye gị ike ịkekọrịta ọdịnaya gị, dị ka inye ego oge. Ọ dịkwa mkpa iburu n'uche na saịtị mgbasa ozi mgbasa ozi dị iche iche nwere ike ịchọ ka ị mepụta ụdị ọdịnaya dị iche iche iji nọrọ na ha niile.
Ọnụego Bounce Dị ala
Ọ bụrụ na ndị mmadụ na-eleta ibe weebụ gị na-etinyekwa oge ụfọdụ n'ịchọgharị ya ma ọ bụ ịgụ ọdịnaya, ọ pụtara na ọdịnaya ị nyere dị mkpa. N'aka nke ọzọ, ndị mmadụ na-alaghachi na nsonaazụ ọchụchọ ha ozugbo ịpịrị na ibe gị na-egosi ihe megidere ya. Lower ibiaghachi udu ma nwekwuo oge iji nyocha ọdịnaya weebụ gị ga - enyere gị aka ị nweta ọfụma karịa ndị na - asọmpi gị.
Mgbe ndị mmadụ na-atụle, na-enyocha, ma ọ bụ na-amasị azụmahịa gị ma ọ bụ ọrụ gị n'ịntanetị, ọ ga-abụ na ibe weebụ gị ga-apụta dị ka a tụrụ aro nye ndị enyi nke onye ahụ ebe ọ bụ na ọtụtụ saịtị mgbasa ozi na-eji nsonaazụ ahaziri iji gosi ndị ọrụ ha ọdịnaya nke ndị enyi ha nwere mmasị. Site n'ime ka ọdịnaya gị na-adọrọ mmasị na mmekọrịta gị na ị nwere ike iji mmetụta ọkpụkpọ a iji melite ọnụnọ nke akara gị n'ịntanetị.
Onu ogugu di elu nke ika gi na eme ka otutu ndi mmadu na acho ya na igwe nyocha. Ajuju nyocha ajuju tinyere aha nke ika gi ga enyere aka na ya ka o gha abia dika ihe kwesiri ntukwasi obi, nke n’eme ka nchoputa nchoputa web peeji gi ka mma n’ime nsonaazụ ọchụchọ maka ọdịnaya yiri nke ị na-enye, ọbụlagodi mgbe akara gị bụ agunyeghi na nyocha ajuju. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị na-emekọ ihe egwu, ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke nyocha dị ka "/ aha ụlọ ahịa gị / guitars" ga - enyere gị aka ị nweta ọkwa ka mma mgbe ndị mmadụ na - achọ "ụlọ ahịa guitar".
Agbanyeghi na enweghi azịza doro anya nye ajụjụ nke otu ụzọ na etu akara nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya si emetụta ogo ibe weebụ gị na nsonaazụ ọchụchọ, mmekọrịta na-enweghị isi n'etiti ewu ewu na mgbasa ozi mmekọrịta na ogo bụ ihe doro anya. Nke a bụ ihe kpatara ụlọ ọrụ jiri tinye nnukwu mgbalị n'ime atụmatụ na itinye n'ọrụ mgbasa ozi mgbasa ozi. A sị ka e kwuwe, ọbụlagodi na akara ngosi mmekọrịta emeghị ka ogo gị dị elu, mgbasa ozi mmekọrịta ka ga-abụ otu n'ime ụzọ kachasị mma iji mee ka ụlọ ọrụ gị dị na ntanetị dị mfe, yana ịkwalite ọdịnaya gị na ndị na-ege ntị na-eto eto zuru ụwa ọnụ.
Tags: Nyochaelekọta mmadụ media